Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ဒေသန္တရသတင်း
မြန်မာအစိုးရ၏တုံ့ပြန်မှု 'အလွန့်အလွန် လိုအပ်နေသေးသည်' ဟု ဘန်ကီးမွန်ပြော ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၁၅ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ်	အကူအညီများထိရောက် လျှင်မြန်စွာပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး လုပ်သားများကို ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသောဒေသများသို့ သွားရောက်ခွင့်ပြုရန် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာစစ်အစိုး ရကို ကြာသပတေးနေ့က ထပ်မံတောင်းဆို...
မြန်မာအစိုးရ၏တုံ့ပြန်မှု 'အလွန့်အလွန် လိုအပ်နေသေးသည်' ဟု ဘန်ကီးမွန်ပြော ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၁၅ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ်	အကူအညီများထိရောက် လျှင်မြန်စွာပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး လုပ်သားများကို ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဒဏ်ခံခဲ့ရသောဒေသများသို့ သွားရောက် ခွင့်ပြုရန် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကြာသပတေးနေ့က ထပ်မံတောင်းဆို...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ စည်းရုံးရေးခရီးစတင်	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ ၁၄ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၇ မိနစ်	ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားပြီး နေပြည်တော်မှ စစ်ခေါင်းဆောင်များက ကြိုဆိုကြဖွယ် ရှိသည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြ...
အကူအညီယူရေး မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် များကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စည်းရုံးမည်	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၁၃ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၉ မိနစ်	ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ် ဆွန်ဒါလာဝပ်ဂ်ျသည် မနက်ဖြန်တွင် မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ လက်ခံရန် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များကို နားချမည်...
အင်္ဂလန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ "လူသားချင်းစာနာသည့် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု" တောင်းဆို	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၁၃ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၇ မိနစ်	အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ မြန်မာပြည်အတွင်း ဝင်ရောက်ရေးနှင့့်် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့ တောင်းဆိုထားသော လက်မှတ်များကို မြန်မာ့အရေး တက်ကြွသူများမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြား သံရုံးများသို့ ယမန်နေ့မှ စတင်ပေးပို့ ...
နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများ လေဘေးအတွက် အလှူခံ	တနင်္ဂနွေနေ့၊ မေလ ၁၁ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၂၀ မိနစ်	နာဂစ် လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတကာရောက် သံဃာတော်များနှင့် မျိုးချစ်မြန်မာများက အလှူငွေများ ကောက်ခံရာတွင် အားတက်သရော ထည့်ဝင် လှူဒါန်းမှုများ ရှိနေသည်ဟု သိရ ...
အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း အဟန့်အတားဖြစ်ရ	စနေနေ့၊ မေလ ၁၀ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၇ မိနစ်	၂၄ နာရီကြာ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအရ ရှုပ်ထွေးမှုများ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်သည် နောက်ထပ်လေယာဉ် ၂ စီးစာ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသွား ...
ဒုက္ခသည်များအတွက် ဘီလ်ဂိတ် ၃ သန်း၊ ဂူဂဲလ် ၁ သန်း လှူချင်	စနေနေ့၊ မေလ ၁၀ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၆ မိနစ်	အင်တာနက် ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်ကြီးတခု ဖြစ်သော Google မှ မြန်မာ့လေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း အထိ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှလည်း အလှူငွေများ ထည့်ဝင် ပေးလှူနိုင်သော လင့်ကို မနေ့က စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ...
မုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ ဆွေမျိုးများအတွက် အိန္ဒိယရောက် မြန်မာများ စိုးရိမ်နေ	ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၀၈ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၅၂ မိနစ်	လေမုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက် စိုးရိမ် ပူပန်နေသည့် အိန္ဒိယရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များက လေဘေးကင်းလွတ်ရေး ဆုတောင်းပွဲတခု နယူးဒေလီတွင် ယနေ့ ကျင်းပ ...
စင်္ကာပူက ငွေပြန်ပို့ နာရေးအသင်းကြီးမှ “ဆန်” ဝေ	ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၀၈ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၃၁ မိနစ်	စင်္ကာပူ။ ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်နှင့် ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများမှ လေမုန်တိုင်းဒဏ် ခံနေရသော မြန်မာပြည်သူများအတွက် အလှူငွေများနှင့် အခြေခံ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနေရသူများ ကိုယ်စား လက်ခံပေးလျှက် ရှိသည်။
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 108 စုစုပေါင်း 127	ကြော်ငြာ
We have 83 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved